कडाको विज्ञापन - परिहास - नेपाल
अब हुँदाहुँदा सरकारले विज्ञापनमा समेत कस्ने भइसकेछ । यदि अरु कसैलाई गालीगलौज गरी विज्ञापन छाप्यो भने त्यसैमा ५ वर्ष कैद । अहिले यो कानुन ल्याइहालेको त छैन, जब ल्याउँछ तब स्थिति के होला । एउटा सानो नमुना हेरौँ ।
पत्रिकामा विज्ञापन छापेबापत एउटा व्यापारीलाई प्रहरीले पक्रेछ । उनीमाथि लागेको आरोप रहेछ– आफ्नो सामान बेच्न अरु सामानलाई गाली गरेको । उसले विज्ञापनमा छापेको रहेछ ‘सहरमा सबैभन्दा उत्कृष्ट सामान’ । यति छाप्यो भनेर उनलाई पक्राउ गरिएको रहेछ ।
प्रहरीमा उनले तर्क गरे, ‘मैले कहाँ अरुलाई गाली गर्या छु र ? आफ्नै सामान राम्रो भनेको छु नि ।’
प्रहरीले भन्यो, ‘आफ्नो सामान राम्रो किन भनेको ? तपाईंले आफ्नो राम्रो छ भन्नुको अर्थ त अरु जम्मैको सामान नराम्रो छ भनेको भयो नि । भयो कि भएन ?’
विचरा व्यापारीले के जवाफ दिनु !